China Lightweight Fireclay Brick mpanamboatra sy mpamatsy |Topower
Brick Fireclay maivana
Ny biriky fireclay maivana dia vita amin'ny aggregate maivana avo lenta ary misy micropores marobe.Ny haavon'ny haavony ambany dia ambany, ny conductivity mafana kely, ny fitsitsiana angovo tsara sy ny fiantraikan'ny insulation mafana, ny kalitao avo lenta ary ny vidiny ambany.
Ny biriky fireclay maivana dia manana ny toetra tsy misy deformation, tsy misy poizina sy tsy misy fofona, fanorenana azo antoka sy mety.Izy io dia fitaovana tsara indrindra ho an'ny rindrina insulation, insulation hafanana ary efitra;tsy vitan'ny hoe mampitombo ny mari-pana, manafohy ny fotoana fanafanana, fa koa mampihena ny fanjifàna solika.Ary manana feo tsara insulation sy feo hisakana ny fiasan'ireny vokany, izay no safidy tsara indrindra ho an'ny angovo-mitsitsy sy ny fiarovana ny tontolo iainana fitaovana.
1. Ny lanjany maivana: ny fahafaha-maina amin'ny biriky maivana dia 500-700Kg / m * 3, izay 1/4 amin'ny simenitra mahazatra.
, 1/3 amin'ny tanimanga, 1/2 amin'ny sakana poakaty, satria ny hakitroky ny ampahany dia kely noho ny an'ny rano, fantatra amin'ny anarana hoe simenitra aerated mitsingevana eny ambonin'ny rano, ny fampiasana ity vokatra ity amin'ny fanorenana dia afaka mampihena ny lanjan'ny tena. ny trano ary mampihena be ny lanjan'ny trano.sarany feno.
2. Fitehirizana hafanana sy insulation hafanana: Nandritra ny dingan'ny fanamboarana ny aerated simenitra, mason-tsivana kely miforona ao anatiny, ary ireo masonkoditra ireo dia mamorona rivotra sosona ao amin'ny fitaovana, izay manatsara be ny vokatry ny hafanana fitehirizana sy ny hafanana insulation, ka ny mafana conductivity Ny simenitra aerated dia 0.11-0.16W/MK.Ny vokatry ny insulation mafana dia avo 5 heny noho ny biriky tanimanga ary in-10 heny noho ny an'ny simenitra tsotra.
3. Fanamafisana feo sy insulation feo: Ny firafitry ny porous ny rivotra-entrained simenitra mahatonga azy ho tsara feo absorption sy feo insulation fampisehoana, izay afaka mamorona rivotra avo-henjana an-trano toerana ho anao.Manome anao tontolo iainana milamina sy milamina.
4. Ny sandan'ny fihenam-bidy kely: noho ny fampiasana fasika renirano avo lenta sy arina voapoizina ho fitaovana siliceous, ny sandan'ny fihenam-bidy dia 0.1--0.5mm / m ihany, ary ny sandan'ny fihenam-bidy kely amin'ny fitaovana avo lenta dia miantoka fa ny rindrinao tsy hivaky.
5. Impermeability: Ny firafitry ny mason'ity vokatra ity dia mahatonga azy ho mahantra amin'ny hetsika capillary, ary mitroka rano moramora ary mitondra ny hamandoana miadana.Ny fotoana takiana amin'ny habetsahan'ny rano mitovy amin'izany mba hisintonana ny rano ho feno dia avo 5 heny noho ny biriky tanimanga.
6. Fiarovana ny tontolo iainana: Ny fizotran'ny famokarana, ny fitaterana ary ny fampiasana dia tsy misy loto, fitsitsiana angovo ary fampihenana ny fanjifana, ary fitaovana fanorenana maitso sy mahavelona ny tontolo iainana.
7. Ny fanoherana amin'ny horohoron-tany: Ny rafitra fanorenana iray ihany dia mampiasa biriky maivana mba hanatsarana ny haavon'ny fanoherana ny horohoron-tany noho ny biriky tanimanga.
8. Faharetana: Ny tanjaka maharitra amin'ny simenitra misy rivotra dia miorina tsara.Taorian'ny herintaona nipoiran'ny rivotry ny santionany dia nitombo 25% ny tanjaky, ary mijanona ho tsy miova izany rehefa afaka folo taona.
9. Processability: maivana lanja, isan-karazany habe, mora fantsika, drill, nanapaka, tsofa, drafitra sy mametraka pipelines, ary mampiasa fanitarana fantsona eo amin'ny rindrina, izay afaka mivantana manamboatra mihantona cabinets, air conditioners, range hoods, sns, ho an'ny. ianao Ny fametrahana ny rano sy ny jiro, ny haingon-trano dia mitondra fanamorana.
10. Refractory: Ny haavon'ny refractoriness dia mari-pahaizana, izay fitaovana refractory kilasy voalohany.Ny fanoherana ny afo amin'ny sakana matevina 100mm dia mety hahatratra 225 minitra, ary ny fanoherana ny afo amin'ny sakana matevina 200mm dia mety hahatratra 480 minitra.
Haavo betsaka (g/cm3)
hery fanerena (MPa) ≥
Avereno ny fanovana andalana
Salan'ny mari-pana amin'ny conductivity mafana 350±25 ℃（w/k·m）
0.1MPa Ny mari-pana voalohany amin'ny fanalefahana eo ambany enta-mavesatra（℃）≥
Temperature serivisy ambony indrindra (℃)
1. Fanaraha-maso ny kalitaon'ny akora manta ao anatin'izany ny fitsapana ara-batana sy simika.
2. Famotehana sy fitotoana ny akora manta betsaka.
3. Araka ny taratasin'ny angon-drakitra mpanjifa takiana amin'ny fampifangaroana Raw Material.
Ny fanindriana na ny famolavolana ny biriky maitso dia miankina amin'ny akora sy ny endriky ny biriky.
4. Amainina amin'ny lafaoro fanamainana ny biriky.
5. Apetraho ao anaty lafaoro tonelina ny biriky mba hodorana amin'ny hafanana ambony kokoa amin'ny 1300-1800 degre.
6. Ny sampan-draharahan'ny fanaraha-maso ny kalitao dia hijery ny biriky refractory vita kisendrasendra.
Amin'ny ranomasina fumigated pallet hazo + plastika fehikibo + plastika film Wrap.
teo aloha: Microporous board
Manaraka: biriky grafit
Brick alumina manokana
Vatofantsika Stainless Steel